नायिका आंचल शर्मालाई श्रीमान उदितले जन्मदिनको अवसरमा किनेको ब्यागको मुल्य २ लाख, यो ब्यागको बिशेषता के छ त्यस्तो ? – Etajakhabar
Posted on: Wednesday, March 18, 2020 Time: 18:15:33
काठमाण्डौमा पहिले युवतीले २ युवकसंग यौ-न स’म्पर्क गर्न लगाइन र त्यसपछि जे गरिन ….
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन गरीब खान नपाउनेले समेत हेर्न बसेका थिए तर बचाउ गरेको पो देखियो(भिडियो हेर्नुहोस )
आँचलको श्रीमान उदिपसँग नाम जोडिएकी सिपोरा को हुन ? उदिपसँग कती सम्म नजिक थिइन ? किन बिहे हुँनै लाग्दा टुट्यो सम्बन्ध ? (भिडियो हेर्नुहोस )
-12741 second ago
-12026 second ago
-10555 second ago
-6347 second ago
-2957 second ago
-2055 second ago